Iyo Apple Watch ichiri nhamba 1 | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch ichiri nhamba 1
Kunyangwe nhau dzichinyevera kuti Apple Watch yakatambura nekuderera mukutengesa kwayo, ivo zvakare vanoratidza kuti inoenderera kuchengetedza iyo nhamba yekutanga chinzvimbo. Pakati pechikamu chekutanga chegore rino 2020, Apple Watch kutengesa kwakadonha asi hazvina kukwana kubvisa chigaro.
Canalys yakaburitsa mushumo umo munoziviswa kuti Apple Watch yakave nekutengesa kushoma mukati mekota yekutanga yegore rino zvichienzaniswa ne2019. 5,2 mamirioni.
Idzo idzo dzinotyisa manhamba uye vanoona kuti kunyangwe ivo vakadonha, hushamwari hweApple Watch ichiripo. Iyo nhamba 1 haina kubviswa nechero chimwe chinhu chakafanana kubva kune mamwe mabhureki Kunyangwe paine mhando dzakanaka pamusika, zvinoita kunge zvisina kukwana kusunungura mambo.
Mumwe wemhedzisiro yekudonha uku mukutengesa kunogona kuve kwakanyanya nekuda kwe kune AirPods kutengesa izvo zvakakura zvakanyanya. Vashandisi veApple vakasarudza kutenga mahedhifoni pane iyo Apple Watch. Kunyange zvakadaro zvinowirirana zvachose.
Yakasimba mhiri kwemakungwa kudiwa kwema smartwatches kwakabatsira kudzora kuita kunonoka kweApple Watch muEurope neNorth America, iyo yaive nekuda kwevatengi veApple vachichinja kutarisisa kwavo kuAirPods. se "inofanirwa kuve" nechishongedzo.
Mugove wemusika weApple wakadererawo. Kubva 46,7% mu2019 kusvika 36,3% kota yekutanga yegore rino. Nekudaro, Apple haifanire kunge ichinetseka zvachose, kunyanya kana yave iri kambani yekutanga kuwana mutengo wakasarudzika wemusika.
Musika wakagadziriswa seinotevera:
Sezvo isu tichiona kubva pamanhamba, Apple inounza pamwechete iwo akafanana maitiro se maronda matatu anotevera pamwechete. Saka Apple Watch ichiri mambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch ichiri nhamba 1
Iyo Apple Camp (iri Kumba) ichave zvakare iri online
Apple yeYouTube chiteshi yave kurarama yeWWDC keyword